Vaovao - Tongasoa eto amin'ny TEZNOLOGI FIZA
HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO., LTD dia mpanamboatra sy mpamatsy simika tanteraka. Manokana izahay amin'ny famokarana sy fanondranana akora simika izay ampiasaina amin'ny fampiharana marobe amin'ny alàlan'ny famahanana, zezika, sakafo, indostrialy ary rano, toy ny sodium chlorite, vovo-tsolika diôzônia, tabilao diôzika klôro, gel diôzida klôro, klôro dioxide granular, lead nitrate, sulfamic acid, barium carbonate, strontium carbonate, barium nitrate, fire assay crucible, fire assay cupel, Ny fanoloran-tenantsika amin'ny fanarahan-dalàna sy ny dingana famokarana vokatra / famatsiana be dia be dia manome fahatokisana ny mpanjifa fa ny vokatra novidian'izy ireo dia hihaona amin'ny azy ireo mila tsy tapaka. HEBEI FIZA TECHNOLOGY CO dia mifantoka amin'ny fanomezana izay ilain'ny mpanjifanay, mandray anjara mavitrika amin'ny vondrom-piarahamoninay sy miaro ny tontolo iainana. Io indray dia manome fotoana ahafahana mivoatra ary mitohy fahombiazana ho an'ny akora simika ary koa ho an'ny mpanjifanay.
Ny orinasanay dia manana sampana sy tobim-pamokarana betsaka manerana ny firenena, manana teknika famokarana matotra simika biolojika sy ekipa sangany ho an'ny famokarana. Ny orinasanay koa dia nirotsaka tamin'ny indostrian'ny simika nandritra ny taona maro, ary ny volan'ny fanondranana dia mijanona ho lohalaharana amin'ny indostria foana. Ankehitriny ny orinasa dia nahavita fampisehoana orinasa lehibe ary nahazo laza malaza amin'ny indostria.
Manana fitaovana sy teknolojia avo lenta izahay, fomba fitiliana tonga lafatra sy rafitra fiantohana kalitao, mihoatra ny 80% ny vokatra vokarinay any Eropa, Etazonia, Amerika atsimo, afovoany atsinanana, atsinanan'i atsimo atsimo, sns.
"Fehezo ny kalitao amin'ny fifehezana tsara ny dingana tsirairay, hatsarao ny serivisy amin'ny alàlan'ny fanompoana tsara ny mpanjifa tsirairay" dia ny faharetana maharitra sy ny fanoloran-tenantsika. Tsy vitan'ny manome ny vokatra mifandraika rehetra fotsiny izahay, fa miaraka amin'ny vidiny tsara indrindra, serivisy teknika avo lenta ary serivisy tsara indrindra hahazoana ny fitokisanao.
Manantena mafy izahay hiara-miasa aminao, hanorina fifandraisana tsara amin'ny fampandrosoana sy fanambinana iraisana! Raha mila zavatra simika ianao dia aza misalasala mifandray aminay!